I-Semalt - Indlela Yokubhekana Ngaxekile Ngempumelelo?
Ugaxekile kuyinkinga evamile ebhekene nabasebenzisi abaningi be-intanethi. Ngokuvamile, imilayezo yogaxekile iphumaabantu abanezinhloso ezimbi njengokuphanga nokuqhaqha. Ama-imeyli ogaxekile aqukethe okunamathiselwe, ama-URL noma enye imiyalelo yokushaya ucingo engenzayenza isisulu sidalule ulwazi olubalulekile ku-spammer. Ugaxekile kuthatha izigidi zamawebhusayithi kanye nolunye ulwazi lomuntu siqu.Njalo ibhizinisi le-e-commerce, iwebhusayithi noma umsebenzisi we-inthanethi kufanele ahlale kude nogaxekile.
Ungaba kude nogaxekile usebenzisa amathiphu nemikhuba, enikezwe nguJack Miller,iMenenja yeMpumelelo Yomthengi Ephezulu i-Semalt ,njenge:
Vikela ikheli lakho le-imeyili.
I-spammers mine yegolide iluhlu lwamakheli e-imeyili. Iningi le-spammers ligxila ekuqoqeniuhlu lwamakheli e-imeyili abathumela ama-imeyli e-spam amaningi. Ukuhlaselwa okujwayelekile okugaxekile okule ndlela kufaka nalabo abasuka kumawebhusayithi e-porn.Ukugcina i-imeyili yakho ephephile kungaba umqondo omuhle. Kubantu abane-website noma abantu abanomsebenzi omkhulu we-intanethi, badala i-imeyili eminingiama-akhawunti ukwenza imisebenzi ehlukene ingaba umbono ocacile. Ngenxa yalokho, ukuhlaselwa okuningi kogaxekile kungabheka kuphela i-imeyili eyodwa hhayi yonke.
Sebenzisa izihlungi zogaxekile.
Kukhona ezinye izihlungi zogaxekile ezikwazi ukuvikela ibhokisi lakho lokungenayo kusuka emilayezo ethileuhlobo noma umthumeli. Amanethiwekhi amaningi wokuphatha okuqukethwe anezihlungi zogaxekile ezingakuvikela kuma-imeyili ajwayelekile ogaxekile. Amawebhusayithi we-imeyili njengo-Outlookfuthi i-Gmail inezihlungi zogaxekile ezinezinga eliphakeme lokusebenza kahle kodwa mahhala. Ngenxa yalokho, ungazuza ku-Umbuso wabo wokulwa nogaxekile.
Abakwa-Spammers bangasebenzisa zonke izinhlobo zamasu ukuze bakchofoze isixhumanisi ku-imeyili noma umlayezo wabo.Ezinye zezindlela ezivamile zihlanganisa inkinobho ebonisa ulwazi olunjengokuthi "cindezela lapha ukuze uzikhiphe ohlwini". Ukuchofoza noma yini eqinisekisa kuspammer ukuthi ikheli le-imeyili livumelekile, futhi umsebenzisi usebenzisa ikheli le-imeyili. Ngaphezu kwalokho, ingaqukatha isixhumanisi kwiwebhusayithi engase ibe yingozi,okungenza ukuthi isisulu sithinteke.
Akusihle futhi ukuvula okunamathiselwe okukhona kuma-imeyli ogaxekile. Lezi zinamathiselo zingaseaqukethe ama-virus afana ne-Trojans. Lokhu kuhloswe nge-malware nezimpethu ekutheleleni ikhompyutha yomsebenzisi oyilitshe. Bangakwazi ukuqoqa ulwazi olubalulekilenjengamazwi okudlulisa isiphequluli noma ngisho nama hook amaningi amakhompyutha. Noma yikuphi okunamathiselwe okukhona kuma-imeyli ogaxekile kufanele kuhlale khona. Noma kunjalo, susanoma yimaphi ama-imeyili ogaxekile ngokushesha kakhulu.
Uma uhlangabezana ne-imeyli oyiqinisekisile ukuthi ugaxekile, kufanele uyibeke njengogaxekile. Lokhuukulinganisa kukukwenza ukuba uhlanganyele emkhankasweni wokuqeda ugaxekile, okwenza ukubalwa kwakho komnikelo. Ngenxa yalokho, vusa i-alamu ngaphambi kokuphunyukainkinga yokugcina omunye umuntu.
Ugaxekile luba ingxenye yomsebenzisi wansuku zonke ye-intanethi. Abantu abaningi bawela ugaxekile njengofanaphishers noma abantu abane-imeyili abanama-imeyili anegciwane. Ezimweni eziningi, abakwa-spammers bahlose amawebusayithi, ama-admins, noma ama-akhawunti womsebenzisi laphouthatha idatha efana nolwazi lwekhadi lesikweletu samakhasimende. Ukuhlala kude nogaxekile kubalulekile. Abasebenzisi banamakhono amahle wokugcina ugaxekile. Ezinye iziqondisoezindleleni ezinhle zokugwema ugaxekile kulezi ziqondiso. Ngaphezu kwalokho, kunezinye izindlela ezinhle kakhulu zokubhekana ne-imeyli yogaxekile. Awukwazi ukuwaugaxekile ngoba ungalungisa imigomo yakho nokukhomba.